सुरक्षा सबै भन्दा राम्रो प्रश्न बिजुली स्केटबोर्ड कम्पनीहरु छन्? - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
सुरक्षा सबै भन्दा राम्रो प्रश्न बिजुली स्केटबोर्ड कम्पनीहरु छन्?
को स्केटबोर्ड को निर्माण गर्ने सन्दर्भमा तपाईं आफ्नो विकास केही पक्ष मनन गर्न सक्छ। तपाईं एक को विचार चाहनुहुन्छ भने बिजुली स्केटबोर्डप्राथमिक मड्यूलर बिजुली पवरट्रेन:, तर तपाईं आफ्नो वर्तमान सेटअप प्रेम, तपाईं eon मा एक नजर लिनु आवश्यक छ। हाम्रो जस्तै द्रुत paced संसारमा, गति र मूल्य दक्षता यातायातका मामलामा महत्वपूर्ण कुरा तत्व हो। कि यो हो। तर एक सवारीसाधान, वेग जस्तै र भिन्न तपाईं बस मिडवे रोक्न किनभने गर्न सक्छन् सडकको बीचमा सम्म चार्ज, साथै महत्त्वपूर्ण छन्। यसका अतिरिक्त, तपाईं तल गिर भने, रोल तपाईं skidding टाढा राख्न रोक्न सम्म। यो तपाईं, यो सुरु यसलाई रोक्न र वेग बदल दिन्छ कि एक हाते टाढा संग तैयार गर्नुपर्छ, र यो नयाँ वा कुशल ग्राहकहरु समायोजित गर्न दुई मोड छ। यो एकदम यी पक्षहरू किन योग्यता र प्रदर्शन असर हेर्न सजिलो छ। यसलाई तथापि यो सामान्य उपयोगको लागि पनि clunky एक असुविधाजनक छ, बन्द-सडक साहसिक लागि एक उत्कृष्ट साथी हो।
त्यसैले त ठूलो केही बिजुली स्केटबोर्ड के? तपाईं पनि बाहिर टाढाको व्यवस्थापन आफ्नो स्केटबोर्ड को बिजुली द्वारा चलाउन साथ सँगै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। को Inboard भारी पक्षमा एक बिट थियो तर एक स्पष्ट छ कि वास्तवमा पकड एकदम पास, अनिवार्य लागि सबैभन्दा भाग थियो टाढा गठन गरेको छ। यस अनुसन्धान 200 घण्टा नजिकै बिताएपछि सिद्ध ब्रान्डहरु बजार मा र मोडेल, हामी शीर्ष 10 बोर्डहरू बजार दायाँ यो क्षण मा उपलब्ध किनेको र पत्ता लगाउन जो ई-स्केटबोर्ड वास्तवमा ती सबै नियम तिनीहरूलाई पक्ष-छेउ परीक्षण! हामी पत्ता लगाउन जो बोर्डहरू धेरै धेरै बिजुली स्केटबोर्ड मूल्यांकन गर्नुभएको सर्वश्रेष्ठ बिजुली skateboards । एक बिजुली स्केटबोर्ड एक स्केटबोर्ड नयाँ सवार लागि बरु धेरै छरितो को एक पुरा बिल्ली प्रयोग बनाउँछ र एक अनुभवी सवार एक वास्तविक लात प्रदान गर्दछ एक Motorized संघटक गरेर एक विशिष्ट स्केटबोर्ड भिन्न हुन्छ। मूल्य - औंठी को एक आधारभूत नियमको, बिजुली skateboards संग रूपमा तपाईं के भुक्तानी प्राप्त।
सकारात्मक। वास्तवमा, बिजुली skateboards लागि अन्तिम माइल यातायात सबै भन्दा राम्रो वैकल्पिक विकल्प मध्ये एक हो। Koowheel थाहा-कसरी दृढ संक्षिप्त दूरी strolling र यति मा को लागि प्रयोग, दुई मोटर संग चार पाङ्ग्रा विद्युत स्केटबोर्ड को इतिहास शुरू। 30km / घन्टा सामान्य वेग को इतिहास भित्र, ब्याट्री जीवन लगभग 20 25km हुन सक्छ। तपाईं यहाँ पूर्ण Dynacraft बिजुली स्केटबोर्ड सिंहावलोकन पढ्न सक्षम छौँ। तपाईं नयाँ सोख टिप्न वा सुन्दर ब्राउजिङ फुटपाथ हेर्न चाहने हुनुहुन्छ कि, coolest बिजुली skateboards तपाईं बाहिर जाँच गर्न लागि यहाँ छन्। सारांशमा गर्न - तपाईं को लागि क्रममा एक, छिटो विश्वसनीय र सबै अत्यन्तै माथि सहज बिजुली स्केटबोर्ड, त्यसपछि koowheel2पुस्ता kooboard तपाईं को लागि खोज हुनुहुन्छ के हो! कि तपाईं खरीद मोडेल मा skimp हुँदैन एउटा अत्यावश्यक सुविधा सवारी मोड पूर्व-सेट को चयन छ। यी यातायात यन्त्रहरू पोर्टेबल हुन्छन् र एक rechargeable ब्याट्री जो दुवै तपाईँको यातायात मुख्य प्रकार रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा गर्न र सार्वजनिक परिवहन देखि प्राप्त गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ द्वारा संचालित छन्। यो पूर्ण longboard, तपाईंको लङ्गबोर्डिङ रमाइलो लागि थप जिप छुटकारा 26 माइल प्रति घण्टा (42kph) स्थिर प्रयोग सम्म गति मार गर्न एक लिथियम-आयन ब्याट्री प्रयोग गर्दछ।
यी बिजुली skateboards खर्च गर्न र प्रयोग गर्न सरल छन्। प्राथमिक बिजुली skateboards मूल बाइक र कार जस्तै सतहहरु मा अनुभव गर्न डिजाइन गरिएको थियो। त्यहाँ यस्तो मात्र गति रूपमा बरु एक संकीर्ण आयाम मा पनि बोर्ड गर्न बोर्ड जाँच गर्न troublesome छ र भिन्न छ, अहिले बिजुली skateboards बाहिर बजार मा उपलब्ध को यस्तो धेरै छन्। बिजुली skateboards सवार गर्न भारी जीवन शैली लाभ आपूर्ति र एक रोमाञ्चक अनुभव मा रुपान्तरितको हरेक दिन पल्टाउन सक्छ। मूलतः प्रविधि सबैभन्दा विकास यी बिजुली skateboards तयार भएको छ। छ माइल अपेक्षाकृत छोटो हिड्नुभन्दा प्रारम्भिक adopters र प्रशंसक, वा व्यक्तिहरूलाई लागि पर्याप्त दायरा हुन सक्छ। म धेरै कम गति भएको मा सम्झौता गर्न keen छु र वास्तवमा पोर्टेबल भन्ने कुरा दायरा हुन्छ।
पोस्ट समय: Mar-07-2018